विदेश भ्रमण टोली - WATV परमेश्वरको मण्डलीको परिचय
आत्मिक गृहनगर, माता परमेश्वरकहाँ जाने बाटो !
कोरिया भ्रमणचाहिँ विश्वभरिका सन्तहरूको जीवनको आशा हो भन्न सकिन्छ ।
देश, भाषा, संस्कृति फरक भए तापनि आत्मिक
परिवार भएकोले कोरियामा आउने विश्वको प्रत्येक देशका
सन्तहरू माताको न्यानो प्रेमभित्र एक भएका छन्।
दक्षिण कोरिया, २१औँ शताब्दीको तीर्थयात्रा
धेरै मानिसहरूले ख्रीष्टको पाइलालार्इ पछ्याउँदै इस्राएलको यरूशलेमलार्इ खोजिरहेको
भए पनि, बाइबलअनुसार यो युगमा पवित्र आत्मा र दुलही आउनुभएको देश, माता परमेश्वरलार्इ भेटेर अटूट प्रेमले प्रभावित भर्इ जीवनको वचनलार्इ सीधै सुन्न र सिक्न
सकिने देश, दक्षिण कोरिया अझ विशेष ठाउँ हो ।
हिजोआज विश्वका धेरै मानिसहरूले माताको देश, कोरिया भम्रण गर्नुको कारण नै यही हो। सारा संसारका सन्तहरूले कोरिया भ्रमण गर्नु भनेको तीर्थयात्रा गर्नुजस्तै हो ।
कोरियाको संस्कृति अनुभव
हरेक वर्ष कोरिया भ्रमण गर्ने विदेशका सन्तहरूको संख्या वृद्धि भएकोले परमेश्वरको मण्डलीले विश्वभरिका मानिसहरूलार्इ बाइबलको सत्यता र माताको प्रेम सिक्दै कोरियाको गहिरो संस्कृति अनुभव गर्ने अवसर पनि प्रदान गर्दछ ।
अहिलेसम्म भ्रमण टोलीहरूले नयाँ करार सत्यताको वचनलार्इ गहिरो तरिकाले सिकेर कोरियाको राष्ट्रपति निवास, राष्ट्रिय सभागृह, छङग्ये खोला, हान नदी, स्वतन्त्रता संग्रहालय, प्राचीन ग्यङबोक दरबार तथा सुवनह्वासङ, कोरियाली लोकप्रिय गाउँ गरी परम्परागत र आधुनिक रूपले प्रसिद्ध रहेका अद्वितीय ठाउँहरूको भ्रमण गरेका छन् ।
कोरियाको भद्रता सिक्नुको साथै गायागुम, तेकवन्दो इत्यादि सिक्दै कोरियालीहरूको बुद्धिलार्इ अनुभव गरेका भ्रमण टोलीले कोरियालार्इ संसारका मानिसहरूमाझ चिनाउने भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन्।
विदेश भ्रमण टोलीको ७० पटक भ्रमणवार्षिक औसत १,५०० जना
सन् २०००देखि विदेश भ्रमण टोली ७० पटकभन्दा बढी कोरिया भ्रमणमा आएका छन् । वर्षमा १,५०० जना सन्तहरू माताको प्रेमलार्इ महसुस गर्नुको साथै कोरियाको विभिन्न संस्कृति अनुभव गरेर फर्किएका छन्। यी सबै परिवारलार्इ हेरचाह गर्नुहुने माताको प्रेमको उपज हो।
प्रत्येकलार्इ न्यानो प्रेम दिनुहुने माताका कार्यहरूले गर्दा विश्वका धेरै मानिसहरू कोरिया भ्रमण गर्ने आशा गर्छन् । आगामी दिनहरूमा पनि परमेश्वरको मण्डलीले विश्वव्यापी गाउँका परिवारहरूलार्इ परमेश्वरको प्रशस्त प्रेमको साथै कोरियाको न्यानो प्रेम र संस्कृतिको विषयमा सारा हृदयले सुनाउनेछ ।
विश्वका धेरै मानिसहरू पूर्वको पल्लो छेउको देश, कोरियामा आउने कारणचाहिँ
बाइबलमा त्यस विषयको अगमवाणी भएकोले हो ।
बाइबलमा जाति-जाति स्वर्गीय यरूशलेम माताकहाँ आउनेछन् भनेर अगमवाणी गरिएको छ। त्यो अगमवाणीअनुसार विश्वको प्रत्येक क्षेत्रका सन्तहरू माता परमेश्वरलार्इ भेट्न ‘बादलझैँ, ढुकुरझैँ’ कोरियामा आइरहेका छन् । माताको प्रेम सिकेर महसुस गरी आफ्नो देशमा फर्किएर व्यवहारमा लागू गर्नु उनीहरूको आकांक्षा हो ।
जाति-जाति तेरो प्रकाशमा र राजाहरू तेरो प्रभातको ज्योतिमा आउनेछन् … बादलझैँ
उड्ने र ढुकुरझैँ तिनीहरूका गुँडतिर उड्ने यी को हुन् ?यशैया ६०:३-८
विदेशका सन्तहरूको अन्तर्वार्ता
सत्यता ग्रहण गरेर पिता परमेश्वर र माता
परमेश्वरलार्इ महसुस गर्न पाएकोमा
साँच्चै खुशी छु ।
म सधैँ विज्ञान र बाइबलचाहिँ विवादास्पद छ भनेर सोच्ने गर्थें। आफूले मेहनतसाथ अध्ययन गरेको विज्ञानचाहिँ बाइबलमा आधारित छ, अथवा बाइबलसम्मत छ भन्ने कुरा म विश्वास गर्दिनथें। तर परमेश्वरको मण्डलीमा आएपछि, बाइबलचाहिँ अगमवाणीले भरिएको र ती सम्पूर्ण अगमवाणीहरू १००% पूरा हुँदैआएको कुरा स्पष्टसँग बुझ्न सकें । बाइबल मानिसद्वारा कदापि लेखिएको होइन, परमेश्वरले मात्र लेख्न सक्नुहुन्छ भन्ने यस्ता थुप्रै तथ्यहरू मैले प्रत्यक्ष देखें । बाइबल सत्य छ । निःसन्देह सत्य छ । यस्तो परमेश्वरको मण्डलीको सदस्य हुन पाएकोमा गर्व लाग्छ, अनि बाइबलभित्रको यस्तो सत्यता जान्न पाएकोमा म ज्यादै खुशी र उत्साहित छु ।
अगष्ट क्रुजवासिङटन डि.सी, संयुक्त राज्य अमेरिका
हामीहरू पूर्ण परिवार, पिता-माता साथमा रहनुभएको स्वर्गीय परिवारका सदस्यहरू हौं ।
यही कुराले परमेश्वरको मण्डलीलार्इ विशेष बनाउँदछ । परमेश्वरको मण्डली जीवन्त छ । मैले ५० वर्षसम्म बेलायतका मण्डलीहरू र क्याथोलिक मण्डलीहरू धाएँ, तर ती मण्डलीहरू जीवन्त छन् जस्तो कहिल्यै महसुस भएन । परमेश्वरको मण्डलीमा जस्तो प्रेम त्यहाँ कहिल्यै महसुस भएन ।
माइकल किङन्यूक्यासल, संयुक्त अधिराज्य
सुसमाचार पाउनुअघि मेरो व्यक्तित्व पूर्ण रूपमा भिन्न थियो । मेरो आदत र विचार पनि पूर्ण रूपमा भिन्न थियो । तर सियोनमा परमेश्वरको सन्तानको रूपमा जन्मिएदेखि मेरो व्यक्तित्व र आचरणमा ठूलो बद्लाव आएको छ । ममा आएको बद्लाव विचारणीय भएकोले म यसरी बद्लिएको देखेर सबै जना छक्क परेका छन् ।
होर हेलिमा, पेरु
“वास्तवमा यो भूमिचाहिँ स्वर्गीय माता रहनुहुने अगमवाणीको भूमि हो। त्यसैले म माताबाट मात्र पाउन सकिने जीवनको पानी ग्रहण गर्न कोरियामा आएको हुँ ।”
“म कोरियामा अझ ठूलो महसुस प्राप्त गर्न र आत्मिक तृष्णाले पिरोलिरहेको फ्रान्स र यूरोपमा परमेश्वरको वचन सुनाउनको निम्ति आएको हुँ ।”
“साँच्चै हाम्री माता, सर्वशक्तिमान् परमेश्वर हुनुहुन्छ । माताको महिमालार्इ मैले आफ्नै आँखाले प्रत्यक्ष देख्न पाएँ ।”
“मैले परमेश्वरको मण्डलीलार्इ नत्याग्ने आखिरी कारण नै माता परमेश्वर हुनुहुन्छ। बाल्यकालदेखि नै मैले सधैँ माता परमेश्वरको चाह गरेको थिएँ, र यो मण्डलीले मात्रै मलार्इ हाम्री स्वर्गीय मातासम्बन्धी गहन सत्यता सिकायो ।”
“माताको अनुग्रहलार्इ अभिव्यक्त गर्ने शब्दहरू नै छैनन् जस्तो लाग्छ । कोरियामा मातालार्इ भेटेर मात्रै माताले सबैलार्इ दिनुहुने प्रेम बुझ्न सकें।”
“माथिको यरूशलेम हाम्री माता हुनुहुन्छ । म बाइबलका सबै अगमवाणीहरूलार्इ विश्वास गर्छु, र मातालार्इ विश्वास गर्छु । मैले माता नै परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुरा थाहा पाएकी छु ।”
“यस पटकको भ्रमणद्वारा माता साँच्चै परमेश्वर हुनुहुन्छ, र उहाँले नै हामीलार्इ चुन्नुभएको हो भन्ने कुरा महसुस गरें ।”
“मलार्इ आशिष् दिन कोरिया आउने अनुमति दिनुभयो, र अन्त्यका दिनहरूमा अगमवक्ता हुने मौका प्रदान गर्नुभयो ।”
केप टाउन, दक्षिण अफ्रिका
“यहाँ कोरियामा पाएको यी सम्पूर्ण आशिष् र आत्मिक भोजनद्वारा म एङ्गोलामा फर्केर गएपछि, आफ्नो जिन्दगीलार्इ सुसमाचारमा सक्दो समर्पित गर्न चाहन्छु ।”
“मैले जे गरे पनि पिता-माताले गर्नुभएको त्यो महान् प्रेम र बलिदानलार्इ चुकाउन अपुग हुनेछ । मैले थोरै भए पनि गर्न सक्ने कुरा भनेको मातालार्इ यो पृथ्वीमा महिमा र प्रशंसा दिलाउन आफूलार्इ पूर्ण रूपमा समर्पित गर्नु हो ।”
विश्वका विद्वान्‌हरूले एक ठाउँमा भेला भएर दिएको 'माता परमेश्वर'को गवाही
विगत हजारौँ वर्षदेखि बाइबलविद्हरूले खोल्न नसकेको बाइबलको रहस्य !
अन्तर्राष्ट्रिय बाइबल गोष्ठीमार्फत त्यस रहस्यको साँचो नै 'माता परमेश्वर' हुनुहुन्छ भन्ने कुरा प्रकट गरियो । आध्यात्मविद्या, इतिहास, स्नायु विज्ञान, अन्तरिक्ष विज्ञान गरी प्रत्येक संकायका विशेषज्ञहरूले बाइबलबाट सुरु गरेर विस्तृत उदाहरण र प्रमाणहरूको आधारमा माता परमेश्वरको अस्तित्व, उहाँको प्रेम र भूमिकाको महत्वबारे गहन रूपले गवाही दिए ।
बाइबलले गवाही दिएको माता परमेश्वर
“बाइबलमा ‘परमेश्वरहरू’ भन्ने अर्थ बोकेको ‘एलोहिम’ भन्ने शब्द करीब २,५०० पटक देखा परेको छ । योचाहिँ विगत हजारौँ वर्षदेखि बाइबलविद्हरूले खोल्न नसकेको रहस्य हुनुको साथै बाइबलमा गवाही दिइएको माता परमेश्वरको अस्तित्व मात्र पत्ता लगाउन सकियो भने सजिलैसँग समाधान हुने कुरा हो ।
मानव-जातिले मुक्ति पाउनको निम्ति बाइबलमा गवाही दिइएको माता परमेश्वरलार्इ अनिवार्य खोज्नुपर्छ ।”
महासचिव पाष्टर गिम जु छल
विशाल ब्रह्माण्डमा जीवनको मूल, स्वर्गीय माता
“आमाद्वारा जीवन पाउने सम्पूर्ण जीवित प्राणीहरूमार्फत अनन्त जीवनको मूल नै माता परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुरा पत्ता लगाउन सकिन्छ ।”
अगष्ट हुहो क्रुज
सन्तुलन ल्याउने माताको प्रेम
“पृथ्वीलार्इ पूर्ण सन्तुलनमा ल्याउने तरिका भनेको परमेश्वरको वचन रहेको बाइबललार्इ विश्वास गर्दै माता परमेश्वरको प्रेमलार्इ महसुस गर्नु हो ।”
पल रिर्चाड विल्कोक्स
“हामीलार्इ जीवन दिने माइटोकोन्ड्रियल इभको वास्तविकताचाहिँ अनन्त जीवन दिनुहुने माता परमेश्वर हुनुहुन्छ ।”
इतिहास विज्ञानको दृष्टिकोणबाट माता परमेश्वरको अस्तित्वको महत्व
“मानसिक र शारीरिक स्थिरताले समाजको विकासमा धेरै योगदान पुऱ्याउँछ । यी सबै कुरा मूलतः आमाबाट आउँदछ ।”
WATV अन्तर्राष्ट्रिय बाइबल गोष्ठी